Sida loo rakibo loona qaabeeyo Telepathy KDE | Laga soo bilaabo Linux
Waan isticmaalay Kopete In muddo ah, waa macmiil guud oo IM ah, wuxuu leeyahay taageero xisaab badan, oo si cadaalad ah, wax xun ma aha haba yaraatee.
Muhiimadu waxay tahay inaysan i qaban haba yaraatee, iima soo jiidan wax igu filan, tani waxay ku sii kordhisay xaqiiqda ah in baahiyaha kale aysan gebi ahaanba shaqeyneyn, waxaan go'aansaday inaan isku dayo Pidgin.
Iyada oo Pidgin wax walboo weyn yihiin, wax cabasho ah kama qabo haha, kaliya in ay tahay GTK laakiin haye, ma heli kartid wax walba oo noloshaan ah LOL !!!
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira ikhtiyaar kale oo noo ah kuwa isticmaala KDE ????
Waxaan idiinka tegayaa xoogaa sawirro ah waxa aan ka hadlayo ... waxaad arki doontaan, waa wax aad u xiiso badan 😀
Hadda, aan u gudubno inaan ku rakibno.
** Xusuusin: Khadadka rakibidda waxaa loogu talagalay Archlinuxhadaad isticmaasho Kubuntu ka dibna kan kale dhig:
2. Diyaar, horey ayey u rakibeen 😀
Hadda, aan u dhigno 🙂
1. Aynu furno Nidaamka doorbidida, iyo qaybta «Shabakad iyo Isku xirnaanWaxaan raadineynaa «Instant fariin":
2. The «Xarunta xakamaynta»Xisaabkeenna, oo runtii ah guddi fudud, aan gujino«Kudar»Tanina way kugu filnaan doontaa ... waxaa nala weydiin doonaa xogta akoonkeenna aan dooranno (Facebook, Jabber, GTalk ama MSN), diyaarna u nahay inaan ku xirno ...
Oo waxaan u habeyn doonnaa koontooyinkeenna ... hadda, Maxaa xigi doona?
Waxaan ku dhejin doonnaa astaan ​​astaanteena (nidaamka saxaarada) kaas oo aan ku xaqiijin doono heerkayaga (la heli karo, mashquul, iwm), iyo waliba waxyaabo badan oo badan.
1. Aynu midig u riixno guddi, dooro ikhtiyaarka «Kudar waxyaabo garaaf ah»Oo waxaan ku arki doonnaa wax sida guddi ka weyn, baarka shaandhada ku leh waxaan ku qornay« tele », taasi waa:
2. Aynu yeelno laba guji gudaha "Joogitaanka fariimaha degdega ah«.
3. Diyaar, aan dhagsano badhanka wareegsan ee cagaaran ee soo muuqday, waxaan arki doonaa fursado badan:
Adeegsiga ikhtiyaarka «La xiriir…Waxaan arki karnaa liistadayada xiriirada, iyo xulashada «Maareeyaha xisaabaadka»Waxaan aadi doonnaa qeybta aan ku darno / ka saarno / ku hagaajineyno xisaabaadkayaga.
Sidoo kale haddii ay rabaan inaan isku mid noqdo saxarada (system saxaarad), waxaad ku riixi kartaa midig, dookhaagana ku calaamadee ikhtiyaarka "Jiritaanka farriinta degdegga ah", waxaan uga tagayaa tusaalooyinka tusaalaha ah:
Ready wax dheeraad ah.
Waan ogahay in kubbada cagaaran aysan aheyn waxa ugu qaalisan sinaba, waxaan ogaan doonaa sida loo badalo waxaanan uga tagayaa cashar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Sida loo rakibo loona habeeyo Telepathy KDE
Runtii waan ka helay tabarucaadan waxaan doonayay wax sidan oo kale ah! 🙂
Waxaan kaliya shaki ka qabaa remains. keydinta sheekooyinka?
miyay hayaan rikoor raad ah?
Sida muuqata maya, ama uguyaraan ma arko ikhtiyaarka.
HAA aad ayey u wanaagsan tahay, sidoo kale hada waxay muujineysaa waxaad dhageysaneysid, waxaan kaliya u baahanahay sida loo badbaadiyo wada hadalada iyo keydka avataar ee asxaabteyda XD
Kaliya waxay ku socotaa nooca 0.2 haha, aan siino waqti yar oo dheeri ah 😉
Waa maxay fuck?
Waan ogahay in halkaan uusan aadeynin, laakiin gaara, waxaad u baahan tahay inaad xoogaa amar ah siiso Mcanime, boggaas ayaa ku burburaya tirada gawaarida ee ka baxsan gacanta.
Ku jawaab isticmaale
Haa, laguma qorin inay jiraan laakiin waxaa jira xD
Waan ku faraxsanahay sida ay u socoto
MCAnime ... T_T ... nacas maxaa xasuus ah T_T ...
Kama dhex muuqan jirin bulshadaas muddo sanado ah, dhibaatooyinka xagga internetka ayaa ii horseeday inaan ka tago booskeyga dhexdhexaadiye iyo in ka badan.
Maxaa ku dhacay MCAnime? Uld Ma ii sharxi kartaa waxa ay ku saabsan yihiin 'trolls'?
Hada, waxa dhacaya ayaa ah inaad jacayl uqabatay gabar dibada joogta oo aan kali lahayn oo aad niyad jabtay, markaa waad iskaga tagtay halkii aad iskaga goyn lahayd sida emos.
By the way, u soo dir email taas inkasta oo dhinaca kale McAnime la yaqaan, goobta la yaqaan = magnet ee trolls
trolls, neceb, karti la'aan iyo dhexdhexaadiyeyaasha edeb darrada ah, spam, subs xun, taageerayaasha wanaagsan ayaa ka tagay bogga iyo xakameyn la'aanta cajiibka ah
Xaalada MCanime ee hada waa murugo, waxaan ku siganayaa inaan ka baxo boggaas
in aan booqday muddo aad u dheer
Halkii aad ka odhan lahayd waxyaabo aan sheekada ahayn oo aad xaqirayso kuwa wax kala hadlaya oo ay tahay inaan laba ilaa saddex saacadood ku qaadanno tirtiridda dhammaan qashinka ay rariyeyaashu ka tagayaan, labalaabid iwm, miyaad nafsaddaada u hurtay inaad isu soo jeediso inaad dhexdhexaadiye tahay Sidee ayey u fiicantahay in wax laga sheego banaanka si daacad ah, hadaad rabto inaad baxdo, markaa waad tagi kartaa, cidna kuma qasbeyno inuu sii joogo.
Anigu waxaan ahay xiriiriyaha pandev92 ee mcanime, tixgelin yar ..
Raali iga ahaada, maxaa yeelay waxaan u ogolaaday dunta inay luntaan inay ka hadasho wax kale.
Kuma xasuusto waqtigaygii MC, waa inaad heshay booska Mod ka dib bixitaankeyga.
Waxaan ku xasuustaa MC aad u wanaagsan, xaqiiqdii waqtigeygii ugu fiicnaa webka, laakiin dhibaatooyinka aad sheegto, runti ma aqaano sababta aysan Rogelio iyo Max u xalin ... taas oo ah, MCA waxaa lagu dhejiyay phpBB2 iyadoo waxbadan laga beddelay naftooda. , haddii aan si sax ah u xasuusto 3 sano ka hor koodhkoodii oo aad uga dheeraaday lambarka phpBB horeyba. Marka laga hadlayo labada qoraalo, shaki la'aan waxay galin karaan shaqo koodhka, sidaa darteed haddii adeegsadaha leh ID-X uu sameeyay qoraalkii ugu dambeeyay, isla aqoonsigaas dib uma soo diri karo illaa iyo inta dambe ee dunta uusan ka tirsanayn isticmaale leh aqoonsi kala duwan, ma fahantay?
Waxaan xasuustaa inaysan jirin Shaqaale dhammaystiran, laakiin waxay ahayd mid aad u fiican dhowr sano ka hor… Zizou, Joshra… Aniga iyo in yar oo kale ayaanan kaamil ahayn sinnaba, laakiin amar wanaagsan ayaa la ilaaliyay, ma jiraa cid ka hartay Shaqaalahaas?
Salaan kadib waadna ku mahadsan tihiin wax badan oo faallo ah, runtii, aad baad u mahadsan tihiin.
Haa, waxaan gaaray dhexdhexaad 6 bilood ka hor, kahor intaanan waqti uqaadan taas, laakiin intaan ogahay, majiraan kuwa aad magacowday oo hadhay xitaa dad aad uyar ayaa kuharay waqtiga si ay wax uga badalaan koodhka. in badan ayaa u heellan mawduuca shirkadda mctekk in ka badan mcanime oo waxaan u arkaa inay macquul tahay ...
Ah, aad baad tahay cusub 😀
Fiiri waxaan si fiican ugu sharxayaa emaylka sida MCAnime, MCTekk iyo kuwa kaleba u shaqeeyaan.
Waxaad arki doontaa in MCAnime uusan jirin MCTekk la'aantiisna, iyo wax kastoo haddii aad rabto aan ku siiyo taariikhda MCT iyo MCA LOL oo dhameystiran !!!
Waayahay, markasta oo aad rabto waadna ii sharixi kartaa :).
Ufff dabcan, waad ku maqantahay MCAnime, waxaan kuugu badalay Linux adiga kumana qoomamoono XD. Runtu waxay tahay waxaan soo galaa MC kaliya si aan u soo dhejiyo qabsashadayda desktop (Ma xasuusataa inaad adiguna sidaas oo kale sameysay?) Iyo wax kale: P. Waqti la'aan awgeed kama faalloonayo sidii hore ee boggaas laakiin hadda oo aan ku jiro vakas waxaan arki doonaa haddii aan dib uga soo kabto kaqeybgalkeygii sidii hore ahayd (* ama *).
Saaxiib blog aad ufiican, hada waxaan uheystaa RSS aan jeclahay: D.
Haa !!! Waan ku xasuustaa adiga HAHAHA ... wax la yaab leh, maxaa yeelay hadaadan ilaawin ... xusuustaydu ma ahan tan ugu fiican LOL !!!
Waa wax fiican 'SUPER' in la ogaado inaad wali isticmaaleyso Linux, iyo inaan wax ku lahaa go'aankaas ... runti way fiicantahay 🙂
Qabashadayda ... hahaha haa, waqti hore horey, waqti fog kahor intaas oo dhan iyo T_T.
Salaan kadib waadna ogtahay, inaad halkaan iga heli karto ... waxkastoo aad ubaahantahay sida waagii hore, waad ii sheegtaa oo gacan baan ku siinayaa 😀
KZKG ^ Gaara oo ma ogtahay goorta laga heli karo qaab ahaan KDE-SC?
Runtii ma aqaan saaxiib 🙁
Laakiin waxaan u maleynayaa, inay wali heysato 3 ama in ka badan oo nooc oo ay tahay in la aado ka hor intaadan tillaabadan qaadin, weli waa mashruuc aad u cusub.
Waad salaaman tihiin kuna soo dhawow bartayada 😉
Hmm, waa wax fiican Wixii aan u arko waxay ku taal kaliya Arch, haddii ay ahaan lahayd Debian oo mishiinkeygu waxyar ka fiicnaaday, waxaan ugu isticmaalaa si farxad leh ...
Halkaas ayaan uga tagay khadadka si aan ugu daro PPA ... waxay kuugu adeegi doonaan Debian sidoo kale 🙂
Nooca hadda jira ma aha wax sidan oo kale ah 2011: \_
isku xirnaanta dijo
Waxay umuuqataa inay fiicantahay markaa waan iskudayaa
Ku jawaab linkaevolution
Iima muuqato aniga: v in, in kasta oo lagu rakibo Telepathy-kde-meta, taasi uma muuqato «dookhyada nidaamka» qaybta «shabakadda iyo isku xirnaanta»
Ku jawaab Inukaze
Talaabada labaad ee rarida gtk-xfce-injiinka Gtk 3 oo la gaadhay.
CMPlayer, hore / maqaar kale oo loogu talagalay MPlayer oo balan qaada